> Resource> FCP> The Best Final Cut Pro Alternative maka Mac (Mountain odum gụnyere)
Final Cut na-emekarị na-ezo aka Final Cut Pro na Final Cut Express. Na ma o doro anya na-arụ ọrụ dị ukwuu Mac n'ihi na ha na-e site Apple. Otú ọ dị, Final Cut Express e kwụsịrị na June 2011. Ebe a, i nwere ike ịhụ a mfe Final Cut Pro ọzọ ma ọ bụ Final Cut Express ọzọ na nke ahụ bụ ma dị ọnụ ala karịa na mfe iji n'ihi video edezi (Mountain Odum, odum akwado). Ebe a na-akwado gị 2 mfe Final Cut Pro ọzọ.
Nkwanye 1: All-na-otu video edezi Software
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ ezigbo video edezi Software, ị nwere ike nnọọ easliy ike zuru okè n'ụlọ nkiri na nke a dị ike edezi software. Ọzọ ihe bụ, software na-agụnye ọtụtụ ndị ọzọ na nnọọ mma ọrụ:
Great edezi Ọrụ, Eme & hazie gị Videos File.
Tọghata ọ bụla video ka editable usoro maka edezi.
APEXTRANS technology atọghata faịlụ 30x ngwa ngwa karịa osompi ngwaahịa.
Nyefee Video enweghị eriri USB.
Nkwanye 2: Ike video edezi Software
A na-enye aka nhọrọ bụ anyị nnọọ onwe Wondershare Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac). Ọ simplifies video edezi workflow na Mac na a na-nyere maka a ọnụ ala price (naanị $ 39.99). Wondershare Video edezi bụghị nanị na-abịa na niile nkịtị video edezi ngwaọrụ gụnyere trimming, cropping, n'usoro n'usoro, merging, wdg, kamakwa ọtụtụ elu na bara uru atụmatụ dị ka visual mmetụta, mgbanwe, ngagharị, na otú pụta. Gịnị kasị mkpa bụ na ị na-enwe ike ịkọrọ video ọsọ ọsọ na mfe na kọmputa, ngwaọrụ, YouTube, na DVD. Ọ pụrụ ịbụ ọkacha mmasị gị Final Cut ọzọ (Mountain odum gụnyere).
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-eji Windows, na-agbalị Final Cut Pro ọzọ maka Windows for free. Ugbu a mụtakwuo banyere oké Final Cut Pro ọzọ - Wondershare Video Editor maka Win.
1 Import video, ọdịyo ma ọ bụ foto a Final Cut Pro ọzọ
Dị ka ihe niile Mac ngwa, Video Editor-abịa ihe kensinammuo na ikpuru-na-dobe interface. Ị nwere ike mfe ịdọrọ na dobe ọdịnaya dezie ozugbo. Na a ngwa supportsa sara mbara nso nke video / audio / foto formats.
The video / audio / foto formats akwado:
Video Formats: MOV, MP4, M4V, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, FLV, AVI, DAT, MKV, DV, MOD, Tod, 3GP, mpg, wdg
Audio Formats: M4A, AAC, AC3, AIF, AIFF, WAV, AU, FLAC, MKA, MP2, MP3, wdg
2 Dezie video, ọdịyo ma ọ bụ foto faịlụ
Ruru ya kensinammuo interface, otú ọ bụla ị chọrọ, ị ga-ahụ nri ngwá ọrụ na obere hassle, gụnyere visual mmetụta, ikwu n'ụzọ, utu aha, trimming, cropping, n'usoro n'usoro, ọdịyo edezi.
Ọdịyo edezi atụmatụ dị mkpa ka Final Cut Pro ọzọ maka Mac. Video Editor Agụnye mfe iji audio ngwaọrụ. Ihe ọ bụla ọ bụ audio track nke video, voiceover ma ọ bụ ndabere music, i nwere ike ịhụ nri ngwaọrụ dezie ya na oge.
3 Share on YouTube, kọmputa, DVD na n'ebe ọ bụla
Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)-enye gị ohere ịkọrọ videos fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla. All kere retains mbụ àgwà nke isi iyi faịlụ ka kasị ruo n'ókè. Ọtụtụ customizable nhọrọ na-nyere ona gị mkpa.
Format: Zọpụta videos na mpaghara dị iche iche formats dị ka MOV, MP4, M4V, MKV, WMV, FLV, wdg
Ngwaọrụ: Play gị video on mobile ngwaọrụ dị ka iPod, iPhone 4, iPad, Zen, Zune, PSP, wdg
YouTube: Kpọmkwem bulite vidiyo na YouTube, na nhọrọ biputere ozi na gị Twitter na Facebook akaụntụ.
DVD: Ọkụ vidiyo na DVD-ewu na-ngwaọrụ ma ọ bụ chekwaa ka DVD media, DVD nchekwa ma ọ bụ ISO image faịlụ ka ọkụ na ndị ọzọ na ngwaọrụ.
Olileanya Video Editor bụ ọkacha mmasị gị Final Cut Pro ọzọ maka Mac (Mountain odum gụnyere). Nye ya a na-agbalị, free. Na ọ bụrụ na ị hụrụ a mma usoro dị ka Final Cut Pro maka Mac, welcome ịkọrọ anyị na ndị ikwu.